Nisongadina sy miely patrana tato ho ato, sady re laza fa firenena tsy manan-tsahala amin’ny fananana harena maro sy sarobidy i Madagasikara. Misy eto amintsika ny otrikarena voajanahary ao anaty tany. Ananantsika ny zavamaniry maro tsy fahita erantany be vidy. Tsy hita pesimpesenina ny hazan-drano miaty anatin’ny renirano sy ranomasimbe manodidina antsika. Valalanina anefa ny tena rehefa mandinika fa tsy migoka ny hasarobidin’izany rehetra izany ny Malagasy mponina sy tompon’ity tany ity. Noheverina fa ny nahazoana fahaleovantena dia hahafahana mitantana sy misitraka ny harena isika. Tsy izany anefa no mitranga fa miha-fadiranovana eto amin’ny taniny ny Malagasy, mahantra eo ambonin’ny harena tapitrohatra.
Manolotra soso-kevitra hentitra izahay eto, fa ny fanaovana ho laharam-pahamehana ny famokarana – fambolena, fiompiana, jono… - no làlana haingana indrindra hamadihana izany tantara ratsy izany. Fantatra fa manodidina ny 80 isan-jaton’ny Malagasy no miaina amin’ny famokarana. Noho izany, dia tsy maintsy hatao vaindohan-draharaha ny famokarana eny ambanivohitra tantanan’ny Malagasy raha tiana handroso isika.
Zava-misy matetika eny ambanivohitra
Ireto misy endri-javatra vitsivitsy manjo ny mpamokatra sy ny mpisehatra amin’ny famokarana.Ratsy ny làlana amin’ny toerana misy ny famokarana. Sarotra ny famatsiana sy fitateram-bokatra noho izany;Miharingana ny omby ilaina amin’ny asam-pamokarana noho ny asan-dahalo sy tsy fandriam-pahalemana;Maro ny vahiny sy mpanambola mibodo sy mitrandraka ny tanin’ny malagasy ka mandroaka azy hiala eo amin’ny taniny. Simban’ny fitrandrahana ny tanimbary… Very antom-pivelomana ny Malagasy; Samborina sy gadraina ny Malagasy miaro ny taniny; Manaraka ambokony ny lazain’ny vondrona iraisam-pirenena ny mpitondra; Tsy misy na tsy ampy ny fanohanana sy fiahiana ny asam-pamokarana.
Paikady hatao hampandrosoana
Ireto no paika hatao, na dia efa voateny ombieny ombieny tsy sasatra no manantitra izany:
Fananana politika mazava amin’ny asa famokarana misy drafitrasa voarindra, manome tombondahiny ny teratany malagasy; Fametrahana fotodrafitrasam-pamokarana maro sy misandrahaka: tohodrano, lakandrano, fitehirazan-drano, làlana famoaham-bokatra, fitaovam-pamokarana sahaza eny ambanivohitra…
Fanomezan-danja ny rafitra Tantsaha sy mpamokatra: vondron’ny Tantsaha, koperativan’ny mpamokatra, sendikan’ny Tantsaha…
Fampitomboana ny fahaiza-manaon’ny Tantsaha amin’ny fanomezana fiofanana sy fahalalana azy ireo: famokarana, fanodinana, famarotana, toe-tsaina mpandraharaha, fanapariahana haitao …
Fanoratana ny tanin’ny Tantsaha hisoratra aminy aloha, vao mijery ny fiaraha-miasa amin’ny vahiny te-handraharaha eto. Atao laharam-pahamehana ny fanomezana tany ny Malagasy aloha. Fanaovana fifindramonina tsara rindra; Harovana ny harena voajanahary sy hatao mafy ny ady amin’ny fanimbana ny tontolo iainana; Fahaizana mampihary ny otrikaren-tsika sy fitantanana mahomby an’izany ho amin’ny fampandrosoana.
Zava-misy sy ohatra vitsy noraisina ireo, ka am-bava omana am-po mieritra. Satria mendrika ho tafita ity Madagasikara sy ny Malagasy tompon-tany monina ao aminy!